BREAKING NEWS: Is rasaasayn ka socota suuqa Gaalkacyo. | puntlandi.com
BREAKING NEWS: Is rasaasayn ka socota suuqa Gaalkacyo.
Wararka uu hadda helayo warsidaha Puntlandi, ayaa ku waramaya in israsaasayn ay ka socota suuqa bartamaha magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay kuwada ganacsadaan ganacsato kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Qof jooge ah oo haatan goobta ku sugan ayaa warsidaha Puntlandi u sheegay in rasaastu ka bilaabatay kadib ganacsato kasoo jeeda xaafada Baraxley ay diideen in la furo bakhaar kuyaala suuqa cir-toogtaha.
Bakhaarkaan iyo goobta laga dhisayba waxaa iska leh ganacsato reer Puntland ah. Markii saakay la isku dayay in badeecado lagu dajiyo, ayay ganacsatada kasoo jeeda Galmudug ku bilaabeen xabbado, iyadoo arrintuna isku badeshay is rasaasayn toos ah, taasoo haatan weli socota.
Lama garanayo sababta loogu dagaalamay xaruntaan, laakiin sida uu goob jooguhu inoo sheegay, ganacsatada Galmudug ayaa kasoo horjeesteen goobta laga furay bakhaarkaan, waxayna diidan yihiin in ganacsi Puntland laga leeyahay uu aagooda kasoo dhowaado.